Public Health in Myanmar: Penile retraction တိုနာ ရောဂါ
ဒီ ကျန်းမာရေး ပြဿနာကို အရပ်စကားသဘော ပြောနေကြတာ အမှန်ဘဲ။ “တိုနာ” လို့ သာမက “သိုဝင်တာ” လို့ပါ ခေါ်သေးတယ်။ “အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်”၊ “ကုသဘို့ရာ အမျိုးသမီး မ-အင်္ဂါအမွှေးကို မီးရှို့ပြီး၊ အရှူခိုင်းရတယ်၊” “မဟုတ်ရင် သေနိုင်တယ်၊” လို့ ပြောကြတယ်။ သူ့အရပ်နဲ့သူ အခေါ်နဲ့ ကုသနည်းတွေ ရှိနိုင်မယ် ထင်တယ်။ ဆရာဝန်တွေ သင်ရတဲ့ အထဲမှာ ပါတာတော့ မတွေ့သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာ စွယ်စုံကျမ်းတွေမှာ စာတင်ခံရတဲ့အထိ ရှိပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို Koro ခေါ်တယ်။ တရုပ်လို Shuk yang, Shook yong, Suo yang လို့ ခေါ်သတဲ့။ Koro ဟာ ရောဂါ တခု အဖြစ် သတ်မှတ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပြီ။ အမေရိကန် “စိတ်ရောဂါ ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် စာရင်းဇယား အညွှန်း” ထဲမှာ ထည့်သွင်း ထားတာ တွေ့လာရတယ်။ “ယဉ်ကျေးမှု အခြေပြု စိတ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်အုပ်စု” ထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ Disease ရောဂါလို့ မပြောဘဲ Syndrome လက္ခဏာ-အစုအဝေး လို့ ခေါ်တယ်။
Koro ဆိုတဲ့ စကား မူလအစက အင်ဒိုနီးရှား တောင်ပိုင်း ဆူလာဝေစီ ကနေ လာတယ်။ Shrinkage “သေးငယ်-တိုတယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ တရုပ် နဲ့ မလေးမှာလဲ အဓိပ္ပါယ်တူ စကားလုံးတွေ ရှိတယ်။ အာသန် နဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံတွေမှာလည်း သူ့အခေါ်နဲ့သူ ရှိတယ်။ တိုင်းပြည်က ညံ့သလား မမေးနဲ့ ဗမာတွေမှာ အဲလိုရှိတာ သူများတွေ မသိကြသေးဘူး။ တယောက် လောက်ကနေ MySpace နဲ့ YouTube ကနေ ဗီဒီယိုဖိုင် တင်ပေးရင် နာမည်ကြီးနိုင်တယ်။
Koro ဆိုတာ ရုတ်တရက် အပြင်းအထံ ယောက်ျားက “သူ့လိင်တံ Genital shrinkage တိုရာ၊ သေးရာကနေ Genital retraction ကိုယ်ထဲ ၀င်သွားမယ်-တယ်” ဆိုတဲ့ ရောဂါဆန်းတခု ဖြစ်တယ်။ တချို့မှာ နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်။ နာရီနဲ့ ရက်နဲ့ အထိ ကြာသတဲ့။ နာတာရှည် သမားလည်း ရှိသတဲ့။ ဒါ့ပြင်လဲ ကျားအင်္ဂါ ပုံပန်း ပြောင်းသွားတာ၊ အားနည်းသွားတာ၊ ဖြစ်သူတွေ ရှိသတဲ့။ မိန်းမတွေမှာလည်း “သူ့နို့သီးထိပ်ဖျား၊ ဒါမှမဟုတ် မ-အင်္ဂါ အထဲထဲ ၀င်သွားမယ်-တယ်” လို့ ရှိသတဲ့။
Labels: Q and A, Reproductive organ disorders မျိုးပွားအင်္ဂါ ပြဿနာ
အသက် ၃၀ ပါရှင်. သားလေး ၁ ယောက်ရှိပါတယ် ၃ နှစ်ပါရှင်.လွန်ခဲ့တဲံ့ ၁လနေစပြီးအဖြူဆင်းပါတယ်။ယခင်ကတော့ရာသီမလာခင် ၁ ပတ်လောက်တွင်လာတတ်နေကြမို့ သိပ်အလေးမထားမိပါ။နောက် ၂ ပတ်လောက်ကြာတော့နေ့စဉ်လာမြဲမို့စိတ်အနှောက်အယှတ်ရှိလာပါတယ်။၃ပတ်မြောက်မှာတော့ ဗယ်ဘက်ဆီးစပ်မှာနာနေပြီး အဖြူလည်းဆက်ဆင်းပါတယ်။ယခု ၁ လမှာတော့အိပ်နေရင်လည်းသိလာတယ် ဆီးစပ်ကဗယ်ဘက်အခြမ်းပဲနာတယ် ။ထိုင်ရင်လည်းနာတယ်။ အမြဲမဟုတ်ပေမယ့် နာတာကိုသိသိသာသာခံစားလာရပါပြီး။ တစ်ခါတစ်ခါ အဖြူရောင် တစ်ခါတစ်လေ အဝါရောင် နဲ့ဂျယ်လီလိုပဲ နှပ်ချေးနဲ့လည်းတူတယ် အချွဲတန်းကြီး အဖြူတွေဆင်းနေတာ ဆီးစပ်ဗယ်ဘက်ကနာတာ သာအိမ်ကင်ဆာလား?သားအိမ်ရောင်နေတာလား? ပုံမှန်အဖြူဆင်းတာလား ??ဘာဆေးမှမသောက်ရသေးဘူးဆရာ ဆေးဈေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံမှာ လစာနည်းနည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရလို့ပါဆရာ။အဲဒီရောဂါတွေဖြစ်နေပြီးလား? ဘာဆေးသောက်ရမလဲ? ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့ လိုနေပြီးလား? ngwesinthoun9@gmail.com (or)ဒီနေရာကနေပဲဖြစ်စေပြန်ဖြေပေးပါဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့်..ငွေစင်သွန်း
ဒီမေးတာကို အခုဘဲဖတ်ရလို့ ပြန်တာ သိပ်နောက်ကျတဲ့အတွက် ဆောရီးဗျာ။ ဒီ (ဆိုဒ်) ကို ကျွန်တော်က တခါတလေမှ ၀င်မိနေလို့ပါ။ ကိုယ်ပိုင် နေရာမှာတော့ နေ့-ညမပြတ် ဖြေနေတာပါ။
“အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၅) Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း” ကို တိုက်ရိုက် ပို့လိုက်ပါမယ်။
မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကင်ဆာ မဟုတ်ဘို့ သေခြာသလောက်ပါ။ ဆေးလဲ ဈေးမကြီးပါ။
Tea ချို-ပေါ့-ကျ တခွက်